Izizathu ze-10 zokuthola i-Scrum Master Certification
Izinzuzo ze-Scrum Master Certification
I-1. Thola isisekelo esiqinile se-Scrum ulwazi
I-2. Shintsha umqondo wakho
I-3. Uzohlala ufanele futhi ukhangayo
I-4. Isikhwama sesiqinisekiso se-Master sizuzisa inhlangano yakho
I-5. Thinta ubudlelwane bakho ukwamukela indlela ye-Agile
I-6. Sebenza kangcono nontanga yakho
I-7. Khombisa imininingwane yakho ye-scrum kubangani bakho
I-8. Joyina iqembu labachwepheshe bekhram
I-9. Gcina amaphrojekthi nabasebenzi abaqeqeshiwe
I-10. Uphawu lwehlonipho
Isikhathi Sokuba Ngumqeqeshi we-scrum oqinisekisiwe
Isikhwama sihlaka oluqondile olugxila ekusebenzisaneni, izinkomba kanye nesivinini esiphambene nemiklamo eyinkimbinkimbi. Ivumela amaqembu ukuba azikhethele futhi athuthukise ukuthuthukiswa ngokushesha, ngokuhambisana nemigomo ye-agile.
Yindlela evelele esetshenziswa phezu kwezwe ngama-SME kanye nezizwe eziningi ngokufanayo; izinhlangano ezinjengeSpotify, i-Microsoft ne-Ericsson zonke zisebenzisa i-Scrum. Kungakhathaliseki ukuthi ungumuntu omusha ku-Scrum, noma unjengoba uchwepheshe we-agile manje, nansi izinzuzo ze-10 ze-Scrum Master isitifiketi:
Thola isisekelo esiqinile sokufunda kwe-Scrum
Uzohlala ufanele futhi ukhangayo
Isikhwama sesiqinisekiso se-Master sizuzisa inhlangano yakho
Thinta ubudlelwane bakho ukwamukela indlela ye-Agile
Sebenza kangcono nontanga yakho
Khombisa imininingwane yakho ye-scrum kubangani bakho
Joyina iqembu labachwepheshe bekhram
Gcina amaphrojekthi nabasebenzi abaqeqeshiwe
Uphenyo olungaphezu kwezinguquko ze-5,400 IT oluthole ukuthi uhlelo lokuchitha imali olwenziwe ngokweqile lufezekisa kakhulu i-45% ngokungahambisani nomsebenzi ukuhlasela. Ngokuphendukela ochwepheshe ku-Scrum, uzohlala kude nalezi zinkinga futhi uthuthukise ukudubula kokuqeda amaphrojekthi akho ngokuphumelelayo nangesikhathi.
I-Scrum izifundo ze-Master kanye nezitifiketi zifinyeleleka, kodwa kwabanye, izinzuzo azisobala ngokushesha. Funda ukuze uthole izinzuzo ze Isikhwama se-Master isiqinisekiso.
Uma kungenzeka ukuthi awuzange uhlangabezane ne-Scrum, ukufeza isitifiketi kuzokubonisa amakhono alindelekile ukukusebenzisa ngempumelelo. Ngethuba elihle lokuthi inhlangano yakho iqalile ukuqhuba indlela ye-Scrum futhi kufanele ube nokufaneleka, ukufeza isitifiketi se-Scrum Master kuzokwakha isisekelo sakho solwazi.
Iphumelele kahle nge-Scrum? Ukugcwalisa isitifiketi se-Scrum Master kuzogcwalisa noma yiziphi izimbobo ongase ube nakho kolwazi lwakho lwe-Scrum. Zonke izinto ezicutshangwayo, kuzodingeka ucabangisise ingxenye ngayinye yeSikram ukudlulisa ukuhlolwa kwesitifiketi.
Isikhwama kuyindlela yokwenza isilwane futhi ukuyisebenzisa ngokufanele uzodinga ukungena emqondweni. Isici esibaluleke kunazo zonke ekuziphatheni okuziphathekayo nokuzikhandla kuyinkampani enengqondo ye-agile.
Ukulungiselela kanye nesitifiketi kuzosusa lesi simo sengqondo wena nabalingani bakho. Njengeqembu uzoba namandla okucabanga ngendlela ehambayo, okwenza ukuphikisana okuncane, okunamathiselwe okungcono kweqembu kanye namaphrojekthi amaningi athelayo.
Izitifiketi kuyindlela emangalisayo yokuzikhangisa wena kubasebenzi futhi ubonise kubalingani nabaqondisi ukuthi uqonde ngokuphelele insimu enikeziwe.
Isikhwama seSikhulu se-Master sizokhulisa ukuvuleka kwamagama ngaphezu kwanoma iyiphi inhlangano esebenzisa imikhuba ye-agile. Isitifiketi ngokungeziwe sibonisa ukuthi unesimo sengqondo esibhekene nesibindi nokuningi kokufunda kwe-Agile, okubaluleke kakhulu kumhlangano ngamunye noma imboni esebenzisa le mikhuba.
Ukwamukela enye indlela kuyisinqumo esikhulu kunoma yiliphi ibhizinisi kusukela lithonya lonke inhlangano: abantu, izinqubo, amaklayenti kanye nabaphathi.
Kule migqa, kubalulekile kubo bonke abathintekayo ukuthi ungakwazi ukufeza izinzuzo zangempela futhi ezinkulu. Ngezinhlelo zokuzikhandla ezingaphenduki futhi eziphindaphindiwe, amaqembu okuzimela, Isikhwama siqhamuka ngempela kule nhlonipho.
Kunoma yikuphi, ukungabikho kokufunda kwe-Scrum angeke kwenzeke imiphumela ethembisayo yokuthi abaphathi bazoyifaka. Ngaphandle kwesitifiketi futhi ukufunda okubalulekile kwanda ngenqubo yokuqinisekisa, ungaphuthelwa iwindi elibalulekile ukuze uthole i-Scrum emhlabathini ngaphakathi kwenhlangano yakho.
Ukuphathwa kuzozizwa kuhle kakhulu ukubeka izinsiza zibe yi-Scrum methodology uma kuboniswa ochwepheshe be-agile njengamanje phakathi kwabo. Isitifiketi se-Scrum Master sibonisa ukuphathwa ukuthi ulungele ukuqhuba indlela ye-Scrum.
Isitifiketi se-Scrum Master sizoba nomphumela onenzuzo ngokuqondene nabasebenzi bakho. Qinisekisa nalabo osebenza nabo futhi ndawonye uzoklama futhi uqinise ulwazi olufanayo nolwazi oluyisisekelo sokwakheka kwesikrini ebhizinisini lakho elikhethekile.
Kungakhathaliseki ukuthi awuthathi inkambo efanayo ye-Scrum njengabangane bakho, naphezu kwakho konke okuzokwenza. Umfundisi ngamunye we-Scrum uzoshintsha ngesitayela sakhe sokufundisa nokuthi yini oyibonayo iyohluka. Kungenzeka uye wagxila ezingxenyeni ezihlukahlukene ze-Scrum.
Ekugcineni, uzoba namandla okuhlanganisa ukuqonda kwakho kokuqonda okuguquliwe kakhudlwana kwe-Scrum kanye ne-agile methodology.
I-Scrum Master Certification ibonisa oontanga bakho ukuthi utshale ukusebenza, ucatshangwa u-Scrum futhi ufunde ukuyisebenzisa ngaphakathi kobudlelwane bakho.
Asikho isizathu esicindezelayo sokuhlala ngokuzenzekelayo ukuphoqa abangane obaziyo izinto zakho - unesiqiniseko sokukubonisa.
Jikela ku-Master Scrum eqinisekisiwe futhi uzojoyina iqembu lezazi ze-Scrum ezibhekene nazo zigxile ekuguquleni okungenakuphelelwa yisikhathi kanye ne-agile indlela.
I-Scrum.org igcizelela uhlelo lomhlaba jikelele lwabaqeqeshi be-Scrum nabaqeqeshi. Leli qembu elinamandla ligcwalisa njengomtapo wolwazi wolwazi, indlela yokuthola izikhathi kanye nendawo ukuthola (nokunikeza) isiqondiso.
Uma kwenzeka ulwela ukuwina amaphrojekthi, iqembu eliqinisekisiwe iScrum Masters ngumvuzo omkhulu. Amaklayenti akho akhona azobona ukulinganisa kweqembu elingabambisana futhi lisebenzise i-Scrum ngendlela enamandla.
Isitifiketi sibonisa inhlonipho okufanele iguqulwe ngokuziqhenya. Ukwengeza, uma ukhona ekuphathweni, ukuthola abamele bakho ukulungiswa nokuqinisekiswa kubonisa ukuxhumana kwakho nomqondo wokusebenza ngokuphathelene nokufunda kwabo. Uzothola abasebenzi abaningi abafundele ukukhathazeka ukusebenzisa izindlela zabo ezintsha.
Njengoba i-max ihamba, "uma kungenzeka ukuthi ucabanga ukuthi uzothola umuntu, uzilungiselele futhi uhambe nawo uyabiza, uthathe ugwayi uma ungawavumeli, ungabalungiseleli futhi ube nawo."
abe I-Professional Scrum Master ngezinsuku ezingu-2 kuphela ku-Innovative Technology Solution. Uzolungisa ngejubane kabili futhi uhlale ukuhlolwa kwakho phakathi kokulungiselela - okuphelele ochwepheshe namaqembu adinga amakhono eSikram esheshayo.
Isikhwama - A design SCALE FREE
Ukuqhathanisa phakathi kwe-PRINCE2 vs. Scrum